အိမ်ထောင်ရှိရဲ့သားနဲ့ စန်းပွင့်နေသော ရာသီခွင် - MyanmarMagazine
အိမ်ထောင်ရှိရဲ့သားနဲ့ စန်းပွင့်နေသော ရာသီခွင်
အပျိုလေးတုန်းကတော့ အဲဒီလောက် ကိုယ့်ကိုကြိုက်မဲ့သူမရှိပါ။ လက်ထပ်ပြီးမှ စန်းပွင့်လာတဲ့ ရာသီခွင်ကတော့ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ။
၀၁. တူရာသီ (Libra) : စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း
သူကတော့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ကျန်းမားရေးကို ဂရုစိုက်လာတာကြောင့် ချောမောလှပနေသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကလေးမွေးပြီးသွားတာတောင်မှ သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ကျော့မော့နေသူပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတာကြောင့် စန်းပွင့်နေတာပါ။
သူကတော့ အရင်ကတည်းက အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူပါ။ လူတွေအပေါ်လည်း သံယောဇဉ်ကြီးသူဖြစ်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံတတ်သူပါ။ လက်ထပ်ပြီးချိန်မှာတော့ ပိုပြီးလို့တောင် သူများအပေါ်မှာကောင်းတာကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများပါလိမ့်မယ်။ ဒီအထဲမှာ ကိုယ့်ကို ရိုးရိုးသားသားထက်စာရင် အချစ်ရေးဆိုလာချင်တဲ့သူလည်း ပါလိမ့်မယ်။
၀၃. ဗိစ္ဆာရာသီ (Scorpis): အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း
သူကတော့ အရင်ကတည်းက ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသူပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီးချိန်မှာ အိမ်ထောင်ရေးသာယာတာကြောင့် ပိုပြီးလို့တောင် လှလာပါလိမ့်မယ်။ သူရဲ့အလှကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ယောင်္ကျားတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။
၀၄. ကန်ရာသီ (Virgo) : သြဂုတ် ၂၂ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်း
ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကို ဆက်ဆံသလို ပတ်ဝန်းကျင်မှ အခြားသောသူများကိုလည်း ဆက်ဆံသောကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများပါလိမ့်မယ်။
စကားပြောကောင်းတဲ့အတွက် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲတမ်း လူတွေရှိနေလိမ့်မယ်။
၀၆. ကရကဋ်ရာသီ (Cancer) : ဇွန် ၂၁ ရက်မှ ဇူလိုင် ၂၀ ရက်အတွင်း
ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားအတွက် နေ့စဉ် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေချိန်မှာ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို ပိုပြီးနားလည်လာတာကြောင့် အပျိုလေးတွေမှာ မသိနိုင်တဲ့ အားသာချက်တွေရှိတယ်။
၀၇. ဓနုရာသီ (Sagittarius) : နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အတွင်း
လက်ထပ်ပြီးရင်လည်း အရင်ကလိုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားလာနေရတာကိုက ပျော်နေတတ်သူပါ။
၀၈. သိဟ်ရာသီ (Leo) : ဇူလိုင် ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ် ၂၁ ရက်အတွင်း
အမြဲတမ်း သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးက ပြုံးရွှင်နေတတ်တာကြောင့် သူကိုမြင်ရသူတွေမှာ ရင်ထဲကို အေးမြသွားစေမှာပါ။
၀၉. မကာရရာသီ (Capricorn) : ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အတွင်း
အပျိုတုန်းကထက်ကို ပိုပြီးလှလာတာကြောင့် သူ့ကိုကြိုတ်တဲ့သူတွေလည်း ပိုပြီးပေါလာပါလိမ့်မယ်။
၁၀. မိန်ရာသီ (Pisces) : ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ မတ်လ ၂၀ ရက်အတွင်း
လက်ထပ်ပြီးချိန်ကတည်းက မိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ အမြဲအလုပ်ရှုပ်နေတာကြောင့် ဘာမှကို မဖြစ်နိုင်ပါ။
ယောင်္ကျားရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲ အမြဲပြောနေတတ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ သူ့အနား မကပ်ရဲပါ။
၁၂. မိဿရာသီ (Aries) : မတ် ၂၁ ရက်မှ ဧပြီ ၂၀ ရက်အတွင်း
လက်ထပ်ပြီးချိန်မှစပြီး ကလေးတွေအတွက် အချိန်ပေးနေရတဲ့အတွက် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားနိုင်ပါ။